Maitiro ekukiya iyo Apple Watch patinenge tichidzidzisa | IPhone nhau
Maitiro ekukiya iyo Apple Watch patinenge tichidzidzisa
Chimwe chezvinhu zvinogona kuitika kwatiri chero nguva panguva yekudzidziswa kwedu ndechekuti isu tine kubata netsaona pachiratidziro cheApple Watch yedu uye isu tinogona kutomira kudzidziswa kana kuzvipedza tisingazivi. Ichi hachisi chinhu chinowanzoitika nguva zhinji uye ini pachangu ndinogona kutaura kuti kunyangwe ndakapfeka mbatya dzakareba-maoko ini kashoma kudzvanya Apple Watch skrini, asi ndinoziva kuti kune vanhu vanoitika kwaari uye ibasa.
Neichi chikonzero, nhasi tichaona iyo system yatinayo pane ese Apple Watch mhando kunzvenga mabatiro asina basa pawatch screen patinenge tichidzidzira nebhasikoro, kumhanya, kushambira kana nechero dzidziso yatiri kuita.
Kiya kana kuvhura iyo wachi skrini
Zviripachena kana isu tangove nekiyi yakavharwa isu hatizokwanise kubata chero chinhu pairi uye ndosaka isu tichifanirawo kuratidza nzira yatinga vhure iyo skrini kupedzisa kudzidziswa kana kuita chero chiito kubva kune yedu wachi. Nzira yekukiya wachi iri nyore kwazvo uye kana tangotanga chiitiko chatinofanira kungoita tevera nhanho mbiri idzi:
Tinofanira kutsvedza kurudyi kudzamara menyu yatinoona mumufananidzo pazasi yabuda
Tinodzvanya padonhwe remvura rinowanikwa muchikamu chepamusoro kuruboshwe «Bvisa» uye ndizvozvo
Kamwe patinodzvanya iyo skrini yakavharwa uye kuti uzarure zviri nyore sekutenderedza Dhijitari Korona. Vazhinji veavo varipo vanogona kunge vatoziva nezvesarudzo iyi muApple Watch kudzidziswa asi zvirokwazvo kune vese vashandisi vatsva vewachi zvinogona kubatsira zvakanyanya kuziva hunyengeri uhwo hunodzivirira kuita zvisingabatike pamadziro echiridzwa uchiita chero chiitiko chemuviri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekukiya iyo Apple Watch patinenge tichidzidzisa
Apple ichatanga kubvumirana nechibvumirano nekambani yekugadzira A24 nefirimu yaSofia Coppola naBill Murray
Vhidhiyo: iyi inogona kunge iri Apple inotevera iPhone: iyo iPhone XI